I-Sonos Ray yinhle, yinhle futhi intengo ngeke ibe izaba [Izibuyekezo] | Amagajethi Ezindaba
UMiguel Hernandez | 07/06/2022 13:00 | General, Izibuyekezo
Sonos Kuyinkampani esiyazi ngokujulile, umkhiqizo okuthi naphezu kwezinga elingenakuphikwa lemikhiqizo yalo belilokhu linesithiyo emphakathini jikelele: Intengo. Lokhu ngeke kusaba izaba ngokufika kwe-Sonos Ray, i-sound bar yokugcina esiyihlolile futhi ngaphandle kokudela lutho, kuvele kube eshibhe kakhulu.
Sibheka kabanzi i-Sonos Ray entsha, ibha yomsindo esethelwe ukubeka isisekelo semakethe, nomsindo omuhle ngentengo engcono kakhulu. Ithole nathi, sizokutshela konke odinga ukukwazi ngakho, ukucushwa kwayo futhi, ngaphezu kwakho konke, ukuhlaziya kwayo.
1 Izinto zokwakha kanye nomklamo: uhlobo lwendlu
2 Umsindo, obaluleke kakhulu
3 Kungani ishibhile?
4 Kodwa useyiNkosi... akasho uSonos
Izinto zokwakha kanye nomklamo: uhlobo lwendlu
Le Sonos Ray ikwazile ukusuka ekwakhiweni kwe-Sonos Beam, kuze kube manje ebiyibha yomsindo eshibhe kunazo zonke ye-Sonos etholakala emakethe. Imfishane kodwa ibanzi, ishona ngemuva edonsa ngisho amehlo, kodwa lokho kumema ukubekwa kwayo emigodini yekhabhinethi kamabonakude. Nokho, igcina igrille enamachashazi ngaphambili, izilawuli zokuthintwa phezulu futhi vele nokuxhumana ngemuva.
Njengenjwayelo, singayithenga ngemibala emibili kuphela, i-matte emnyama kanye ne-matte white. Izilinganiso zayo zingamamilimitha angu-559 x 955 x 71 ngesisindo esingamakhilogremu angu-1,95, incane kakhulu kune-Sonos Beam, into emangazayo ku-unboxing.
Ukuhlelwa kwezikhulumi kungemuva ngokuphelele, ngakho-ke ngeke sibe nezinkinga ekubekeni kwazo noma ekuhleleni, ikakhulukazi uma siyibeka ngaphansi nje kwethelevishini. Ngesikhathi esifanayo, inamahange amabili kubakaki abajwayelekile bodonga kakade kuvame e-Sonos, ngemuva.
Le mininingwane iyathanda ukwazi, kodwa inezilinganiso eziphelele zokuyibeka embobeni ifenisha yegumbi lokuhlala le-IKEA yakudala… noma yiliphi ithuba? Nakulokhu i-Sonos yenze umkhiqizo obukeka ungowokugcina futhi uzizwa uyi-premium.
Umsindo, obaluleke kakhulu
Ikhwalithi yomsindo, njengoba kwenzeka ngokukhiqiza, inezinga eliphezulu lekhwalithi enkampanini, yingakho okuqukethwe kwekhathalogi yayo. Kodwa-ke, i-Sonos ithanda ukugcina izimfihlo zobuchwepheshe zemishini yayo kahle, kungakhathaliseki ukuthi sizama kanzima kangakanani ukungena kuzo. Noma kungenzeka, ukwakheka kwebha ye-Sonos Ray inakho ngaphakathi kuyo:
Ama-amplifiers edijithali e-Class-D amane kulungiswe kusakhiwo se-acoustic sebha.
Izipikha ezimbili eziphakathi nendawo ukusebenza kahle okuphezulu ukufanisa ama-bass namafrikhwensi ezwi.
ama-tweeter amabili Ishunwe ukuze ilethe impendulo ehlanzekile yemvamisa ephezulu.
Ngeshwa angikwazi ukukunikeza ama-frequency ranges noma amandla kuma-watts, yinto futhi engimangazayo, kepha iyingxenye yomlingo we-Sonos, ungacabanga ukuthi bafihla okuthile, kepha uma usuyiqalile, ngeke uthole ukuthi iyini. yi. Amafomethi omsindo asekelwayo yilawa:
I-DTS Digital Surround
Ukuze unikeze umsindo othambile kakhulu ngangokunokwenzeka, kusetshenziswa ubuchwepheshe I-Bass Reflex System kulungiswe kuma-acoustics ale divayisi ethile, ngaphezu kwesistimu I-TruePlay ukuthi ngedivayisi ye-iPhone izohlaziya imvelo futhi iqondise kabusha umsindo endaweni lapho kufanele ufike khona.
Umphumela uba umsindo olinganiselayo, oguquguqukayo, futhi uhlukanisa kahle phakathi komculo nefilimu, ukugcwalisa igumbi elincane noma eliphakathi kahle.
Asisike silijaha, lokhu I-Sonos Ray ibiza ama-euro angu-299, okungama-euro angu-200 ngaphansi kwebha yomsindo eshibhe elandelayo yenkampani, i-Sonos Beam, kanye nama-euro angu-700 ncamashi ngaphansi kwe-flagship yomkhiqizo, i-Sonos Arc, ngakho... kungani ibiza kancane?
Kulula, I-Sonos isuse imbobo ye-HDMI-ARC, okusho ukuthi ukuxhumana okuqondile kukhawulelwe kukhebuli yomsindo obonakalayo, ngakho-ke, ukuze sikhiqize kabusha okuqukethwe kukamabonakude wethu kufanele silungise ukuphuma kwentambo ye-optical futhi silawule ivolumu ngokulungisa ithelevishini ngokwayo.
Lokhu kuvumela izinga eliphezulu kakhulu, okuphumayo komsindo we-optical kufika (noma okungcono) kune-HDMI, kodwa kukukhawulela mayelana nokusebenzisana ne-TV.
Ngokusobala futhi silahlekelwa ukuhambisana komsindo okubonakalayo endleleni IDolby Atmos, ngakho-ke sisele nesitiriyo se-PCM sendabuko. Ekugcineni, futhi asinawo imibhobho ngakho-ke ngeke ihambisane nabasizi ababonakalayo, phakathi kwabo i-"Hey Sonos" entsha emenyezelwe uhlobo.
Kodwa useyiNkosi... akasho uSonos
Ngokusobala, idivayisi ye-Sonos iyidivayisi ye-Sonos. Kulokhu, inohlelo lokusebenza oluzokuvumela ukuthi ulungise ukuthuthukiswa kwengxoxo, okubaluleke kakhulu ukuze amazwi azwakale ngaphezu kwemisindo nomculo wamamuvi.
Singadlala ngeSpotify Connect kusuka ku-Sonos noma ku-Spotify ngqo umculo wethu esiwuthandayo, futhi ohambisanayo I-Apple Music, I-Deezer nabanye abahlinzeki, ngaphandle kokulahlekelwa umbono weqiniso lokuthi iyithuluzi elinokuxhumana okuhambisanayo kwe-WiFi nge-AirPlay 2 kusuka ku-Apple, ngakho-ke akukho mingcele ekusakazeni nasekudlaleni umculo bukhoma.
Ukuxhumana kuzosuselwa ku- I-WiFi 802.11n, noma uma kunesidingo ngentambo yenethiwekhi ye-Ethernet engu-10/100 lokho kufakwe kudivayisi. Ukusisiza nsuku zonke, inesamukeli se-IR esizosisiza ukuphatha ngokushesha umabonakude nevolumu.
Ukuyilungisa, kulula njengokulanda uhlelo lwe-Sonos, mahhala ku-Andriod kanye ne-iOS/iPadOS lapho izokwenza ukusesha okusheshayo futhi ithole i-Sonos Ray yakho khona manjalo, okunye kuyindaba yokushaya "okulandelayo" nokulinda. Uma usangabaza, ividiyo ehambisana nalokhu kwaziswa ifaka okokufundisa okuncane ekusetheni i-Sonos Ray.
Ngiyathanda ukuthi bakwenza kube lula kimina, futhi ukuthi uma ebangeni eliphakathi/eliphezulu besihlale siyincoma i-Sonos Beam, ebangeni lentengo Thina singuRay, okungukuthi, kusuka kuma-euro angama-200, angikwazi ukuncoma enye ibha yomsindo ngaphandle kwalena.
Uma ukungabikho kwe-Dolby Atmos, umsizi wezwi obonakalayo kanye ne-HDMI eARC kuyisikhubekiso kuwe (amadivayisi amaningi ashoda eyodwa noma zombili lezi zisekeli), Ngaphandle kokungabaza, i-Sonos Ray ihamba phambili emakethe ngenani lemali.
Idivayisi iyathengiswa ngama-euro angama-299 kokubili kuwebhusayithi esemthethweni ye-Sonos nase-Amazon, njengasendaweni evamile yokuthengisa (El Corte Inglés kanye ne-FNAC).
Kuthunyelwe ku: 7 Juni ka-2022
Ukulungiswa kokugcina: 4 Juni ka-2022
Izinto zokwakha ze-Premium nokuklama
Ukuxhumana okungenantambo nakho konke
Ukushoda kwabasizi ababonakalayo
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Sonos Ray yinhle, yinhle futhi intengo ngeke ibe izaba [Buyekeza]